Leliphi ilizwe elinamathuba amaninzi emisebenzi kumaIndiya?
Oktobha 3, 2021 UMaitri Jha Indiya , imisebenzi
Leliphi ilizwe elinamathuba amaninzi emisebenzi kumaIndiya? Amazwe afana ne-United States, i-United Kingdom, i-Japan, i-New Zealand, i-Canada kunye ne-Portugal, ziphakathi kweyona ndawo ithandwayo apho ama-Indiya anokuhlala khona kwaye asebenze khona. i-USA
Septemba 28, 2021 IShubham Sharma Indiya , Maleyishiya, ababaleki, hamba, ivisa
Abantu bakhetha ukufudukela eMalaysia ngezizathu ezahlukeneyo. IMalaysia lilizwe elinenkcubeko eninzi ngurhulumente ozinzileyo kwezopolitiko. Uninzi lwabantu lusazi kakuhle isiNgesi. Abafuduki banokuxubeka ngokulula kubemi bendawo njenge
I-visa ukusuka e-Afghanistan ukuya e-India: i-e-Emergency X-Misc visa
Septemba 15, 2021 UMaitri Jha Indiya , hamba, ivisa
Yeyiphi iVisa yokufaka isicelo ukusuka eAfghanistan ukuya eIndiya? I-e-Emergency X-Misc visa I-India ithathe isigqibo sokurhoxisa zonke ii-visa ezinikezelwe kubemi base-Afghanistan. Kodwa unokufaka isicelo se-e-Visa ekhethekileyo kwindawo karhulumente ebonelelwe ngezantsi. I-Visa ekhethekileyo
Septemba 3, 2021 UAntika Kumari Indiya , imisebenzi
Ukulahleka kwemisebenzi kurhulumente eKerala, eyayitsala abagqatswa ngaphambili, kuyavuka kwaye kulapha ukuhlala. Ukuqeshwa kukaRhulumente kungathembisa kwaye kubonelele ngozinzo nokhuseleko olungenakho ukwenza umsebenzi wabucala. Imisebenzi karhulumente waseKerala inokuqinisekisa
I-visa yase-Egypt yamaIndiya
Agasti 20, 2021 IShubham Sharma Egypt, Indiya , ivisa
I-Egypt lelona lizwe linabantu abaninzi base-Arab kumantla e-Afrika. Unobuhlobo obude neIndiya, kwaye abemi baseIndiya bahlala betyelela i-Egypt kushishino kunye nokuzonwabisa. Ukutyelela i-Egypt kwezokhenketho, kufuneka uqale ufumane imvume ku
Uyifumana njani iVisa yabakhenkethi eIndiya?
Agasti 6, 2021 UAntika Kumari Indiya , hamba, ivisa
I-Indiya lilizwe elinomoya wokubuka iindwendwe eliphatha iindwendwe ngentlonipho nothando. Isizwe esikholelwa kwinkolelo enye: "Undwendwe luyalingana noThixo." Kuninzi okunokufunyanwa kulo mhlaba weenkcubeko ezahlukeneyo, ezendele nzulu
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eIndiya? inyathelo ngenyathelo isikhokelo
Julayi 30, 2021 IShubham Sharma iibhanki, Indiya , imali
E-Indiya, apho urhulumente azama ukwenza ikhompuyutha yonke into enezixhobo zebhanki ngoncedo lwe-IndiaStack, obona buchwephesha bukhulu be-API obuvulekileyo emhlabeni, ukuba neakhawunti yebhanki kuye kwaba yimfuneko yokufikelela kuyo nayiphi na inkonzo yezemali okanye ukuthenga
Julayi 16, 2021 UAntika Kumari Indiya , imisebenzi
IPune yenye yezona ndawo ze-IT zikhulu eIndiya, kunye nenani elikhulu leenkampani zesoftware ye-IT, kukho amathemba amaninzi okuhlaziya kwe-IT ePune. Ngenxa yoko, uninzi lwabagqatswa abavela kulo lonke elaseIndiya bayathontelana ukuya ePune befuna
1 2 3 ... 9 I zithuba ezilandelayo»